“Birds of Prey” ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ Box Office ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာ ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဝေဖန်ရေး နယ်ပယ်မှာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Warner Bros. ဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းသစ်တွေဖြစ်တဲ့ “Wonder Woman 1984” နဲ့ “The Batman” ရုပ်ရှင်တွေ ကျန်ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အပြင် “The Suicide Squad” နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်လည်း ဆက်လက် ဖန်တီးဖို့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
DCEU ရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေထဲမှာတော့ “Shazam! 2” ဟာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပြီး ပထမရုပ်ရှင်မှာကတည်းက အနုပညာအရရော ငွေကြေးအရပါ အောင်မြင်မှု ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Zack Synder ရိုက်ကူး ပုံဖော်ထားတဲ့ Superman ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် Henry Cavill ကို “Shazam! 2” မှာ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည်တွေ့မြင်ရဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတချို့ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေမှာတော့ Superman ကို စတန့်မင်းသားနဲ့သာ Shazam!2မှာ ထည့်သွင်းဖို့ စီစဉ်ထားသလား၊ Henry Cavill ကိုပဲ ထည့်သွင်းသရုပ်ဆောင်စေမလားဆိုတာတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
Cavill ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ WB. နဲ့ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဖို့ ရှိ၊ မရှိဆိုတာလည်း အခုချိန်အထိ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရသေးပေမယ့် Shazam!2မှာသာ သူ့ကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုရင် Superman ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာကိစ္စ တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်း The Rock ပါဝင်တဲ့ Black Adam ရုပ်ရှင်ဟာလည်း ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပြီး Shazam!3မှာ ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက် ဆုံတွေ့ဖို့ ရှိနေတယ်လို့ နီးစပ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ခန့်မှန်းပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ။
နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Zachary Levi ကတော့ နောင်လာမယ့် ကာလမှာ Superman နဲ့ Black Adam တို့ရဲ့ ဆုံတွေ့မှုကို သူ့အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်း Shazam!2မှာသာ Superman ကို တွေ့မြင်ရမယ်ဆိုရင် အတိုင်းမသိ ရင်ခုန်စရာဖြစ်ကြောင်း အင်တာဗျူးတခုမှာ ဖွင့်ဟဝန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“Captain Marvel 2” ရုပ်ရှင်မှာ Wolverine အဖြစ် Henry Cavill ပါဝင်လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေ
Topics: Shazam! 2, Superman